“Waxaa laga yaabaa in Cavani uusan ku faraxsaneyn ku laabashada Ronaldo ee Man United” – Berbatov - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
September 17, 2021 at 09:43 “Waxaa laga yaabaa in Cavani uusan ku faraxsaneyn ku laabashada Ronaldo ee Man United” – Berbatov2021-09-17T09:43:53+02:00 CAYAARAHA
(Manchester) 17 Sebt 2021. Halyeeyga kooxda Manchester United ee Dimitar Berbatov ayaa sheegay in ku soo laabashada Cristiano Ronaldo ee Red Devils laga yaabo inaysan u ahayn dhacdo farxad leh xiddiga reer Uruguay ee Edinson Cavani.
Cavani ayaa iska dhiibay lambarka maaliyadiisa, oo uu xirnaa kahor inta uusan soo laaban Cristiano Ronaldo, kaasoo ah lambarka 7-aad, waxaana lagu wareejiyay CR7.
Wargeska “Metro” ee dalka England ayaa shaaciyay wareysi uu bixiyay Halyeeyga kooxda Manchester United ee Dimitar Berbatov, wuxuuna yiri:
“Laba kulan iyo saddex gool oo uu u dhaliyay Cristiano Ronaldo ka dib markii uu ku soo laabtay maaliyaddii gaduudka ahayd, lama yaabin saamaynta deg -dega ah ee uu ku yeeshay United, wuxuuna sameyn doonaa horumar inta lagu jiro xilli ciyaareedka.”
“Waxa ay noqon doontaa wax xiiso leh in la arko sida Solskjaer u farxad galiyo ciyaartoydiisa kale, waa in uu go’aansado sida uu u adeegsan doono xiddigaha kale sida Edinson Cavani iyo Anthony Martial.”
“Cavani malaha ma faraxsana, xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay wuxuu ku fiicnaa United.”
“Waxaan rajeynayaa Solskjaer inuu si daacad ah uu kala hadlay Cavani qorshihiisa kooxda.”
« Midowga musharixiinta:- Farmaajo waa in loo aqoonsada Qaswade!
Labada macalin oo midkood la filayo inuu noqod badelka Solskjaer ee kooxda Man United oo la shaaciyay »